kwi & t samsung galaxy s7 yexabiso elisebenzayo kunye nomhla wokukhutshwa
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Shatter-resistant Samsung Galaxy S7 Active isungula kule veki kwi-AT & T.
Shatter-resistant Samsung Galaxy S7 Active isungula kule veki kwi-AT & T.
I-AT & T namhlanje ekugqibeleni ibhengeze i-Samsung Galaxy S7 Active, iselfowuni ebesikhe sayibona ngaphambili imifanekiso eyahlukeneyo evuzayo . Ukuphumelela i-Galaxy S6 esebenzayo ukusukela kunyaka ophelileyo, i-S7 Active isenokungabi yinto enomdla njenge-S7 okanye i-S7, kodwa loo nto ayisiyiyo nenjongo yayo. Into esinayo apha yirugged, i-smartphone enzima kunye nebhetri enkulu kakhulu.
Njengamanye amalungu amabini e-Galaxy S7 uthotho, i-S7 Active iyi-IP68-eqinisekisiweyo, ethetha ukuba yi-apos-uthuli- kunye nokunganyangeki kwamanzi (ungayidibanisa ukuya kuthi ga kwiinyawo ezi-5 zamanzi ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30). Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nomda oqhelekileyo we-S7 kunye ne-S7, i-S7 Active iyaphikiswa: ngokweSamsung, iya kuphila & apos; yehla ukusuka kwiinyawo ezi-5 okanye ngaphantsi kumhlaba othe tyaba '. Ngapha koko, ifowuni entsha erhabaxa ipakisha ibhetri ye-4000 mAh-enkulu kakhulu kune-3000 mAh ibhetri onokuyifumana ngaphakathi kwe-S7 yesiqhelo. Kunyaka ophelileyo & apos; s Galaxy S6 Active yayiyintshatsheli yebhetri , kwaye silindele okufanayo nakulowo ungene ezihlangwini zakhe.
I-S7 Active yeyokuqala yeGlass eSebenzayo ye-smartphone ukubandakanya iskena somnwe (esifakwe kwiqhosha lasekhaya). Ngaphandle, isiphatho esiphathwayo sinika uninzi lweempawu ezinayo i-Galaxy S7 yesiqhelo, kubandakanya umboniso we-5.1-intshi Super AMOLED kunye neepixels eziyi-1440 x 2560, iprosesa ye-Snapdragon 820, i-4 GB ye-RAM, kunye ne-32 GB yendawo yokugcina eyandisiweyo. Ifowuni entsha ikulungele nokuthatha iifoto kunye nevidiyo, njengoko iza nekhamera efanayo eyi-12 MP ngasemva enabantakwabo be-S7. Ngaphandle kokuthetha, isixhobo siqhuba i-Android 6.0 Marshmallow ngaphandle kwebhokisi.
I-Samsung Galaxy S7 Active iya kufumaneka ukuqala nge-10 kaJuni, ngokukodwa kwi-AT & T, zombini kwi-intanethi, nakwiivenkile, iza ngemibala eyahlukeneyo emithathu: iSandy Gold, iCamo Green, kunye neTitanium Grey. Abathengi baya kuba nakho ukuthenga i-S7 eSebenzayo kwi-AT & T Elandelayo ngeedola ezingama-26.50 ngenyanga iinyanga ezingama-30, okanye kwi-AT & T Elandelayo Qho ngonyaka nge- $ 33.13 ngenyanga ngeenyanga ezingama-24.
IGalaxy S7 Active iya kuba yinxalenye yezibonelelo ezahlukeneyo ze-AT & T. Umzekelo, ukuba uthenga ifowuni entsha kwi-AT & T Okulandelayo, uya kukwazi ukufumana ifayile ye- Isamsung Gear S2 I-smartwatch yasimahla (iinkonzo ezingenazingcingo ezifanelekileyo ezifunekayo kuzo zombini izixhobo). Okanye, unokufumana ii-handsets ezimbini ezisebenzayo ze-S7 kwi-AT & T Elandelayo, kwaye ufumane ukuya kuthi ga kwi-695 yeedola kwiikhredithi zebill ngaphezulu kweenyanga ezingama-30.
Ke, ngaba ukhona umntu okhangele phambili ekuthengeni le smartphone inzima kwi-AT & T?
I-Samsung Galaxy S7 iyasebenza
Inqaku le-9 le-Android 9.0
ngolwesihlanu omnyama 2016 iphone 7
Ngaba unayo ikhadi lesipho kuGoogle Play? Nazi iiapos zendlela yokuyikhulula
I-Apple iPhone 6 kunye neApple iPhone 6 Plus iyathengiswa kwiBoost Mobile ngexabiso le- $ 100, ukuqala ngoLwesihlanu olandelayo
Ifowuni yakho & apos; s ibhetri inokubunciphisa ubomi bayo ngenxa yomshawulo ongenazingcingo
IiNkcazo zePython ezinemiqathango - Ukuba, Else kunye no-Elif
Olona lawulo lubalaseleyo lwangoLwesihlanu oMnyama kuApple
Ezona fowuni zintathu zeefowuni zokufowuna, ukuvota okanye ukusasaza ngqo
Ungayingenisa kanjani ilayibrari yakho yomculo iTunes kwisixhobo sakho se-Android usebenzisa uMculo kuGoogle
Iya kukhutshwa nini i-Fortnite kwi-Android?